Corn price strong in the domestic market
The corn prices have been strong since February when Thailand started importing corn from Myanmar, according to market sources. Despite being coincided with the coup on February 1, the corn market was not affected thanks to Thailand’s strong demands causing the corn price strong.
Rainy season-grown corn and winter-grown corn are now out of stock and summer-grown corn will be yield in October while winter-grown corn in December and January.
Myanmar has planned to export 2.1 million tons of corn mainly to Thailand and China.
ထိုင်းသို့ပြောင်းပို့​နေချိန် ပြည်တွင်း၌ လက်ကျန်နည်း၍ စျေးတက်
ထိုင်းက မြန်မာ့ပြောင်း စတင်ဝယ် ယူသည့် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စ၍ ယနေ့အထိ စျေးကျ သွားခြင်း မရှိပဲ အမြင့် စျေးဖြင့်သာ စျေးကောင်း ရနေကြောင်း စျေးကွက် အတွင်းမှ သိရသည်။
ထိုင်းက မြန်မာ့ပြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁ရက်မှ စ၍ ဝယ်ယူချိန်နှင့် ပြည် တွင်း၌ အာ ဏာသိမ်းချိန် တို က်ဆိုင်ခဲ့သော်လည်း ထိုင်း၏ ပြည် တွင်း လိုအပ်ချက် များပြား ခြင်းကြောင့်သာ ပြည် တွင်း ပြောင်းစျေးကွက် အပေါ် အ ကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပဲ စျေး ကွ က်၊ စျေးနှုန်း အားကောင်းလျှက် ယနေ့အထိ စျေးကျဆင်းခြင်း မရှိပဲ အမြင့်စျေးဖြင့် တည် ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ်ထွက် မိုးပြောင်းနှင့် ဆောင်းပြောင်းက လက် ကျန်မရှိ တော့ကြောင်း၊လာမည့် အောက်တိုဘာလတွင် နွေပြောင်း ထွက်ရှိခြင်းနှင့် ဒီဇင်ဘာနှင့်ဇန်နဝါရီ လကုန်တွင် ဆောင်းပြောင်းထွက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀-၂၁ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ပြည်ပသို့ ပြောင်းတန်ချိန် ၂၁သိန်းကျော် တင်ပို့ရန် လျာထားကြောင်း၊ ထိုင်းနှင့် တရုတ်သို့ အများဆုံး တင်ပို့ကြောင်း သိရသည်။